laacib » LAMA FILAANKA Suuqa: Tababare Jose Mourinho oo Chelsea ka afduubanaya Matic
LAMA FILAANKA Suuqa: Tababare Jose Mourinho oo Chelsea ka afduubanaya Matic
Tababare Jose Mourinho ayaa diyaar u ah inuu Chelsea ku abuuro xaalad maskax abuur ah isagoo isha ku haya inuu kala soo saxiixdo qadka dhexe ee Nemanja Matic.
Naadiga Chelsea ayaa haatan ka wal walsan xaalada gooldhaliyahooda kaas oo la rumeysan yahay inuu dalab weyn ka helayo horyaalka China, sidoo kale tababare Mourinho ayaa udhaqaaqaya in hogaamiyaasha Horyaalka uu kasoo afduubto Matic
Inkastoo weeraryahanka Atletico Madrid Antoine Griezmann uu yahay dooqa koobaad ee suuqa macalin Jose Mourinho, hadana wargeyska The Mirror ayaa ogaanaya in tababarahan uu doonayo in saxiix weyn uu ka dhigto 28 jirka Matic.
United ayaa bangiga kusoo xareysatay lacag dhan £22 million taas oo ay ka heshay iibintii Morgan Schneiderlin halka Michael Carrick uu isna galayo da’da 36-ka sano, waxaana uu ubaahan yahay tababaraha reer Portugal ciyaaryahan la isku haleyn karo oo qadka dhexe ah.
Hadii uu xidigan ka tago Chelsea kuna biiro United, markaas tababare Jose Mourinho ayaa awoodiisa isugu geyn doona sidii uu ula soo saxiixan lahaa weeraryahanka reer France ee Griezmann .
Xidigan loogu doon doonista badan yahay horyaalka Ingiriiska ayaa badal unoqon doona Wayne Rooney kaas oo aanan la hubin mustaqbalkiisa laacibkii, tababare Mourinho ayaana aamisan in Griezmann uu kooxdiisa wax badan kusoo kordhin doono.
Hase ahaatee kooxdiisa ayaa ubaahan lacag gaareysa £75 million hadii ay fasaxayaan gooldhaliyahan heerka caalami/
United ayaa sidoo kale aanan ka quusan saxiixa daafaca Benfica Victor Lindlhof iyo da’yarka laacibkii Celtic Kieran Tierney kaas oo ka ciyaara daafaca bidix.